फेरि चर्कियो कांग्रेसमा विवाद « News of Nepal
फेरि चर्कियो कांग्रेसमा विवाद
असन्तुष्ट पक्षले आज पनि बैठक बहिष्कार गर्ने
रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं।
महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन् चर्किंदै गएको छ।सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विधान र संविधानको व्यवस्थामा टेकेर आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष लम्ब्याउन चाहेको देखिन्छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले तत्काल १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन ताकेता गरिरहेको छ।
बिहीबारको बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का अनुपस्थित भएपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैठकमा विभागको संख्या बढाउनेलगायतको प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो।
डेढ वर्षअघि महाधिवेशन नहुने निश्चितजस्तो भए पनि नेतृत्व तहका नेताहरू अधिवेशन लक्षित दबाब र प्रभाव बढाउन लागिपरेका छन्। कांग्रेसले नियमित अधिवेशन गर्ने हो भने आउँदो फागुनमा सक्ने गरी १४औं महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने थियो। तर यो सम्भावना टरिसकेको छ।
म त विराटनगर जाँदै छु : पौडेल
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आज आइतबारका लागि पनि बैठक बोलाइरहेका बेला सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलले भने आफू विराटनगर जाने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभएको छ।
शनिबार साँझ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले आफू विराटनगर जान लागेकाले बैठकमा सहभागी नहुने बताउनुभएको हो।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता टोली गठन भएको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो– ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा साथीहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।’